စက်တင်ဘာလ 2017 - စာမျက်နှာ2- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2017 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လစဉ်မော်ကွန်း: စက်တင်ဘာလ 2017
PBT အီးယူ IBC2017 မှာအကူးအပြောင်းအတွက် Shape စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကိုကူညီပါမှအဆင့်မြင့် EXEcutor & SubtitleNEXT ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်း
IBC ရဲ့ခန်းမ 1 အတွက် PBT အီးယူရဲ့တက်ကြွရောက်ရှိခြင်းနှင့်ကြှမျး PBT အီးယူ IBC ရဲ့ 2017th နှစ်ပတ်လည်ပြပွဲပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးပေး PlayBox နည်းပညာအီးယူမှာ IBC50 မှာအကူးအပြောင်းအတွက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပုံဖော်ကူညီပါရန်အဆင့်မြင့် EXEcutor နှင့် SubtitleNEXT ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းပညာရှင်များအားပေးပါမှစိတ်ကြိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ပို့ပြီး (PBT အီးယူ) ၏စံချိန်အရေအတွက်သရုပ်ပြ ...
ရာထူး: ရှေ့ပြေးပုံစံအင်ဂျင်နီယာချုပ် International ကုမ္ပဏီ: မြောက်အမေရိက LLC ၏ BMW ကား။ တည်နေရာ: ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် Mountain View, CA အမေရိကန်, BMW ကား Group မှကောင်းစွာအပွေးပွိုငျလမျးကျော်လွန်သွားဖန်တီးမှုနှင့်အောင်မြင်မှုများစိတ်ကူးများဖို့ကတိကဝတ်ရှိပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အန္တိမမောင်းနှင်မှုစက်တွေဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့များ staffing အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းထူးချွန်မောင်းထုတ် ...
အဆိုပါ 2017 NAB Show ကိုနယူးယောက်, AVIWEST ​​အတူ Booth N819 မှာ VidOvation သွားရောက်ကြည့်ရှု
Lake Forest, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ စက်တင်ဘာ 28, 2017 - VidOvation ယနေ့ Craig အာဗြံသည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ကြောင်းအခန်းကဏ္ဍအတွက်အာဗြံသည် broadcast, အားကစား, အစိုးရ, AV စနစ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ကိုးကွယ်စျေးကွက်၏အိမ်သူအိမ်သားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားလာမြောက်အမေရိကအရောင်းအဖွဲ့ကိုအဓိကပံ့ပိုးကြလိမ့်မည်။ "ဟုအဆိုပါဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက် ...
CRAS အောက်တိုဘာ 14 ပွင့်လင်းအိမ်နိုင်သည့်အလားအလာ, ကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်; Speak မှအားကစားသူဟာ Emmy Award ဆု Winner
ပုံရိပ်စာတန်း: CRAS ဘွဲ့ရ Benjamaar Hubbard ကသူ့ရဲ့အားကစားEmmy® Award ဆုနှင့်အတူဂိမ်း Creek အဘိဓါန်ဗီဒီယိုမှာတစ်ဦးအလုပ်သင်အင်ဂျင်နီယာ။ Hubbard အောက်တိုဘာ 13 အပေါ်ပွင့်လင်းအိမ်၏ Open Panel ကိုဖိုရမ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ Gilbert, Ariz စက်တင်ဘာ 28, 2017 - မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory (CRAS; www.cras.edu) ။ အသံအင်ဂျင်နီယာပညာရေးအဘို့, ဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့အစည်းမှတံခါးဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် ...
SyncBac PRO '' ရွှေ Rush '' ပေါ်တွင်သိသိသာသာအချိန်ချွေတာသုံးစွဲကယ်ယူမှ Workflows ပြောင်းလဲ
WORCESTER, ဗြိတိန် - စက်တင်ဘာ 28, 2017- SyncBac PRO, GoPro (R) ကင်မရာများများအတွက် Timecode စနစ်များ '' ကြိုးမဲ့ embedded timecode ထပ်တူပြုခြင်းဖြေရှင်းချက်, အမေရိကန်အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများစီးရီးရှစ်အပေါ်သိသိသာသာထိရောက်မှုငွေစုကိုအပ်ထားပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူ "ရွှေ Rush ။ " စီးရီး၏သင်တန်းကျော် GoPro ကင်မရာများအပေါ်ဖမ်းမိအကြောင်းအရာနာရီ, SyncBac PRO ပတ်သက်. အဖြစ်မှန်ပြပွဲများအတွက် Workflows အသွင်ပြောင်း ...
ကောင်းသောအကြောင်းအရာ Protected သည် Paid ခံရနေရမည်
"ဤလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတူဖြစ်နေဆဲ, ပြောင်းလဲသွားပြီသော်လည်း။ " -, heck တိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း - ဆယ်လင်း, "Underworld နိုးကွား," Screen ကိုကျောက်မျက်ရတနာယခုနှစ်ရဲ့သူဟာ Emmy အတူ 2012, ကမတူကွဲပြားမှုနှင့်တန်းတူညီမျှမှုကို M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေတုန်းပဲသိသာခဲ့သည် - တဦးတည်းဧရိယာ မှလွဲ. ။ ပြည်သူ့မတူကွဲပြားမှု, သူတို့ကစောင့်ကြည့်သည့်ပစ္စည်းပစ္စယအတွက်တန်းတူညီမျှမှုရှိသကျသပွေ။ ...
Jeremy Weber နဲ့လိုင်းစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လတ်ဆတ်တဲ့မဟာဗျူဟာရှိမယ်, Digigram မှာပဲ့ယူ
MONTBONNOT, ပြင်သစ် - စက်တင်ဘာ 28, 2017 - Digigram ယနေ့ကုမ္ပဏီ၏အသစ်ကစီအီးအိုအဖြစ် Jeremy Weber ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ အသံနဲ့ဂီတအကြောင်းကိုအသည်းအသန်, Weber ကတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 15 နှစ်ပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူကလတ်ဆတ်တဲ့အရှိန်အဟုန်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ထိုးသွင်းမည်ကို Digigram တစ်ဦးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဝိညာဉျကိုဆောင်တတ်၏။ သူ၏အတှေ့အကွုံမြား, စွမ်းအင်, အာရုံနှင့်အပျနှံ ...
Pronology 2017 NAB နယူးယော့ Show မှာကမ္ဘာ့-Class ကိုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Encoding Solutions ကိုဖေါ်ပြရန်
New York, စကျတငျဘာ 28, 2017 - Pronology, ဖြတ်တောက်-အစွန်း tapeless လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြုစုသူ, NAB နယူးယော့ 2017 (Booth N270) မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် encoding က tools တွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီယခုနှစ်ပြပွဲမှာ၎င်း၏ CenterPoint Core မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) ပလက်ဖောင်း, MRes ကို standalone Multi-resolution ကိုအန်ကုဒ်နဲ့ Screener, multi-ရုပ်သံလိုင်း, ဖိုင်-based ထုတ်လုပ်မှုစိစစ် device ကို feature ပါလိမ့်မယ်။ "ကျနော်တို့က ...
data-Driven AR ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Module Wows လူငယ်ကဏ္ဍ & IBC မှာလွှမီဒီယာ
Montreal, စက်တင်ဘာလ 28, 2017 - Astucemedia, ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်, ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းနှင့်ဒေတာများပေါင်းစည်းမှုများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးဆက်သွယ်အတွက်ခေါင်းဆောင်များ, Vizrt ၏ Big AR ပြရန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အမ်စတာဒမ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က IBC မှာ၎င်း၏အသစ်က Interactive မှနှင့် AR ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Module သရုပ်ပြခဲ့သည်။ IBC ပြပွဲဧည့်သည်များ Astucemedia ရဲ့ဒေတာကိုပေါင်းစည်းမှုနှင့် AR စွမ်းရည်၏တန်ခိုးနှင့်ဒီကဗျာတိုးမြှင့်မှုများကစိတ်အားထက်သန်စွာခဲ့ကြသည် ...
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ - ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး
ရာထူး: Project မှ Manager က - ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ: AMS ရုပ်ပုံများတည်နေရာ: Dallas မြို့ကတက္ကဆပ်အမေရိကန် AMS ရုပ်ပုံများထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post စစ်ဆင်ရေး၏ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်မယ့်စီမံကိန်း Manager ကိုရှာကြံနေပါတယ်။ AMS သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဗီဒီယိုအားစစ်ဆင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ့်ကော်ပိုရိတ် client ကိုအတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းမန်နေဂျာများအကြားအဆက်အသွယ်၏တံခါးသော့ကိုအမှတ်အဖြစ်အစေခံပါလိမ့်မယ် ...
ပြခန်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် Manager ကို
ရာထူး: ပြခန်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် Manager ကိုကုမ္ပဏီ: အမျိုးသမီးများနေ့ & သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတည်နေရာ: ကျွန်တော်ရှာနေတာကဘာလဲ Austin TX အမေရိကန်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးအရိပ်နဲ့အနုပညာအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့် artful ကုန်သွယ်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအသေးစိတ်တစ်ခုမျက်စိရှိပြီးစားသုံးသူခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာသူလမ်းကြောင်းသစ်ဆိုသည်အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအနေအထားအပြီးအပိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းများ: ...
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရေးစင်တာ Manager ကို
ရာထူး: ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရေးစင်တာ Manager ကိုကုမ္ပဏီ: အနုပညာတည်နေရာ၏မေရီလန်း Institute ကကောလိပ်: Baltimore MD အမေရိကန်ကျောင်းသားရဲ့ပညာရေးနှင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတွက် JHU MICA ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရေးစင်တာအဆောက်အဦ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကူညီပေးနေကြီးကြပ်။ အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်: စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်တစ်အသိုင်းအဝိုင်း Workspace နှင့်ထိထိရောက်ရောက် JHU နှင့် MICA အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းနည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အဦ, စာသင်ခန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အင်တာဖေ့စပါဝင်သောပညာရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်။ တာဝန်များ: •စီမံမည် ...
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ - ဂဟေဆော်ခြင်း
ရာထူး: ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ - welding ကုမ္ပဏီ: Actuant ကော်ပိုရေးရှင်းတည်နေရာ: သင်၏အလုပ်၏မောပန်းအနောက်ကွေး WI အမေရိကန်နှင့်အတွေးအခေါ်များအသိအမှတ်ပြုခံရမဟုတ်လော ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပျလာကြ - ငါတို့သည်, ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်သင့်အားမေးပါနှင့်သင့်ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံနံပါတ်မဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ်လာ Actuant မှာသင့်ပံ့ပိုးမှုများရှိပါတယ် ...
ရာထူး: ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Actuant ကော်ပိုရေးရှင်းတည်နေရာ: ကိုလံဘတ် WI အမေရိကန်ကသင်၏အလုပ်နှင့်အတွေးအခေါ်များ၏မောပန်းအသိအမှတ်ပြုခံရမဟုတ်လော ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပျလာကြ - ငါတို့သည်, ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်သင့်အားမေးပါနှင့်သင့်ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံနံပါတ်မဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ်လာ Actuant မှာသင့်ပံ့ပိုးမှုများမြင်နိုင်ဖြစ်ကြပြီး ...
ရာထူး: သင်၏အလုပ်၏မောပန်းကိုလံဘတ် WI အမေရိကန်နှင့်အတွေးအခေါ်များအသိအမှတ်ပြုခံရမထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Actuant ကော်ပိုရေးရှင်းတည်နေရာ? ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပျလာကြ - ငါတို့သည်, ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်သင့်အားမေးပါနှင့်သင့်ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံနံပါတ်မဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ်လာ Actuant မှာသင့်ပံ့ပိုးမှုများမြင်နိုင်နှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှိပါတယ် ...
2 ၏စာမျက်နှာ 38«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»